PressReader - Ilanga: 2018-11-08 - Bashayelwani indiva abadlali abevile ku-30?
Bashayelwani indiva abadlali abevile ku-30?
Ilanga - 2018-11-08 - Izindaba - Mxolisi Zuma EMGUNGUNDLOVU
MHLELI: Kukhalwa nxazonke ngokunganakwa kwabadlali bakanobhutshuzwayo asebevile eminyakeni ewu-30 ubudala. Laba badlali kababe besanakwa uma kade bevele bengadlaliswa njalo emaqenjini abo, bagcine sebencengela emazingeni aphansi. Kade ngifunda indaba (kwiLANGA) ethinta umdlali owavelela emaqenjini amakhulu, okuyiOrlando Pirates neMamelodi Sundowns, uLebohang Mokoena, okhala ezisula izinyembezi ezingenamkhawulo, izinyembezi zeze leze.
Isikhalo sakhe sithi uyoyixoxela amagwababa echobana emehlele esigabeni esikhulu sikanobhutshuzwayo waseNingizimu Afrika (Absa Premiership) nasemaqenjini aso ngesikhathi efuna umsebenzi nekhaya elisha ngemuva kokushiya kwi-Ajax Cape Town FC ekupheleni kwesizini ka-2017/18.
Uma nje uke wafika ku-30 weminyaka yobudala, uyikhehla. Kulokhu-ke ngigxeka abezindaba nathi bathandi bezemidlalo ngokufaka ingcindezi engenasidingo kubaphathi bamaqembu.
Indlela yokuqeda lesi sihlava wukuvalwa kwegebe emaligini akuleli. Makungabi negebe elikhulu kangaka ngoxhaso phakathi kwe-Absa Premiership, iNFD ne-ABC Motsepe League. YiSafa nePSL abasemandleni okuguqula isimo esikhona ngaphambi kokuba konakale kakhulu kunalokhu.
Umehluko ka-R10 million no-R500 000 ngenyanga emaqenjini adlala kwi-Absa Premiership nadlala kwiNFD kakufanele ngabe ukhona. Lokhu kudala ukuba ibukeleke phansi enye iligi uma kungeyona enkulu. Uxhaso malubekhona ndawo zonke, noma lungeke lulingane. Njengoba iligi enkulu ixhaswa yibhange lakwa-Absa, kumele okungenani abaxhasi abafana neCastle Lager basabambe iqhaza emaligini amancane aseNingizimu Afrika, nabo oCoca Cola aseke babakhona phezulu.
Enye into okumele yenziwe, wukuthi makushaywe umthetho obophezela abamaqembu ukuba babe nabadlali okungenani ababili abaqhamuka ezinkuliseni zamaqembu nophuma emaligini amancane akuleli.
Masikhohlwe ngokwenziwa kwamanye amazwe, ukulanda abadlali abaningi ngaphandle, abaningi babo abehlulwayo ngabakuleli.
Uma ngikha nje phezulu, uGodfrey Walusimbi (29) uhlulwa ngumfana omncane uSiphosakhe Ntiyantiya kwiKaizer Chiefs, kodwa ngoba ulandwe ngaphandle akabekwa ebhentshini. Sengithinte izinto eziningi kodwa isikhalo sami wukuthi kuncishiswe igebe emaligini amancane nenkulu ukuze kuhlonishwe bonke abadlali abadlala kula maligi.
UMFUNDI uphawula ngendaba yokushaywa indiva kwabadlali abaneminyaka yobudala ewu-30 kuya phezulu emuva kokufunda udaba lukaLebohang Mokoena kwiLANGA.